ဤသည်မြင့်မားသောမျက်နှာကျက်နှင့်အတူဟောင်းကျောင်းကိုဥရောပကြော့ရှင်းဖြစ်ပါသည်, Brasserie fittings, ထင်ဟပ်နံရံများ, နှင့်တရားဝင်စားပွဲထိုးစားပွဲထိုး.
ပဲရစ်မှာတစ်ဦးကလှိုင်း-မှုတ်သွင်းကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုစတေးလျနှင့် Frenchie ကော်ဖီဆိုင် start အခါသင်ရကားအဘယ်သို့, ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကျော်ကြားဆုံးကဖေးယဉ်ကျေးမှုကိုစွဲလမ်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. ဒါဟာဥရောပမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များများ၏စာရင်းပေါ်မှာမြင့်မားစေသည်.
ထိုကဲ့သို့သော Mok အဖြစ်တည်ထောင်ရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဘရပ်ဆဲလ်သည်ဥရောပမြေပုံပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များတွင်ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်.
ဒါဟာဟုအမည်ပေးထားသည့်ထားပြီး ကော်ဖီ၏ပြဇာတ်ရုံ. ဒါဟာကျိန်းသေဥရောပစာရင်းထဲတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များပေါ်တွင်နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်. ဤသည်အာကာသကော်ဖီအစဉ်အလာတစ်ခုအခမ်းအနားသည်နှင့်တစ်ဦး State-Of-The-Art Roastery အတူအရသာအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်. ဝီလီ Wonka ကော်ဖီနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်းစားပါ.
Edinburgh အတွက်, Brew Lab သည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်.
စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် Lab မှရဲ့ထူးခြားမှုကိုပိုမိုအဘို့မိမိတို့တံခါးများပေါ်တွင်ကန်ပြီးလူရှိပါတယ်. သူတို့ရဲ့ကော်ဖီ menu ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှတစ်ဦးသေတမ်းစာပင်ဖြစ်သည်.
ဒါဟာလေးခုလှည့် Single-မူရင်းကော်ဖီ features. နှစ်ဦးက၎င်းတို့၏ဘီယာအရက်ချက်ဘားတန်းနှင့်၎င်းတို့၏အိတ္စပရပ္ bar ပေါ်တွင်အခြားနှစ်ခုအပေါ်ပြသနာတွေပြီ. ကော်ဖီအားလုံးအတွက်အရသာနှင့်အတူ ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ် pastries, သောစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် Lab မှမရှိရှားပါးမှုရှိပါတယ်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 အကောင်းဆုံးကော်ဖီခုနှစ်တွင်ဥရောပများအတွက်အကောင်းဆုံးCafé” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-cafes-europe/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)